पत्रकार पुडासैनी झुण्डिएको कोठाबाट झोला हरायो, सिसि क्यामेरा पनि बिग्रियो , सिधाकुरा टिमले खोजि गर्ने – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २१ श्रावण मंगलवार १५:१९
पत्रकार पुडासैनी झुण्डिएको कोठाबाट झोला हरायो, सिसि क्यामेरा पनि बिग्रियो , सिधाकुरा टिमले खोजि गर्ने
एजेन्सी, काठमाडौं। माउन्टेन टेलिभिजनमा कार्यरत शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या रहस्यमयी देखिएको छ । वीरगञ्ज जान हिडेँका शालिकराम पुडासैनी नारायणगढको कंगारू होटलमा बसेका थिए तर उनी त्यही झुण्डिएको अवस्थामा सोमबार राति भेटिए । त्यसपछि प्रहरीले परिवारका सदस्यहरूलाइ खबर गरे । अहिले परिवारका सदस्यहरू चितवन पुगेका छन । उनीहरूले घटनाको प्रकृति हेर्दा आत्महत्या नभएर हत्या भएको बताएका छन ।मृतक पत्रकारका दाजु विष्णु पुडासैनीले प्रहरीले राति ११ बजे खबर गरेपछि चितवन पुगेको बताएका छन ।
अहिले परिवारका सबै सदस्य जम्मा भएका छन । उनीहरूले घटनाको प्रकृति हेर्दा हत्या भएको दाबी गरेका छन । घटनास्थलमा पुगेका नुवाकोट कांग्रेसका नेता लेखनाथ मुडभरीले कुरागर्दै शालिकरामको झोला गायब हुनुले हत्या भएको परिवारको तर्कमा बल पुगेको बताउँछन । उनले बोकेको झोला उनी झुण्डिएका कोठामा अहिलेसम्म नभेटिएको उनी बताउँछन । उनले पनि शालिकरामको आत्महत्या हो भन्ने विश्वसा गर्ने आधार नभएको बताउँछन । होटलमा सिसि क्यामरा भए पनि त्यो बिग्रिएको भनेर होटल सञ्चालकले बताएका छन ।
उनीहरूले २ महिनादेखि सिसि क्यामरा नचलेको बताएका छन ।माउण्टेन टेलिभिजनका प्रदेश २ का प्रमुख पत्रकार महेश दासँग शालिकरामले आफू रिपोर्टिङका लागि वीरगञ्ज आउन लागेको बताएका थिए । तर उनी बाटोमा पनि रिपोर्टिङकै लागि बसे वा के भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन । पत्रकार दासका अनुसार उनीले वीरगञ्ज आउने जानकारीमात्र गराएका थिए । तर उनी वीरगञ्ज नपुग्दै चितवनको कंगारू होटलमा मृत भेटिएपछि सहकर्मीहरूको बीचमा समेत सन्नाटा छाएको छ ।प्रहरीका अनुसार पुडासैनी सोमबार दिउँसो करिव ३ बजे काठमाडौँबाट होटलमा पुगेका थिए ।
होटल बुकिङ गरेर केही समय होटलमा कोठामा बसी केही समयपछि होटलबाट बाहिर गएका थिए र पछि होटलमा अाएर बसेका उनी खाना खान नअाएपछि होटलका कर्मचारीले बोलाउन जाँदा उनीले कोठा नखोलेपछि प्रहरीलाइ खबर गरेको र त्यसपछि वडा प्रहरी कार्यालयका प्रहरीले घटनास्थल नियन्त्रणमा लिएका थिए ।यसै बिच सिधा कुरा टिमले पनि सत्य तथ्यको खोजि गर्ने जानकारी दिएको छ। प्रोड्युसर दिपक बोहोराले एक स्टाटस लेख्दै उनि आत्महत्या गर्ने मान्छे नभएको बताएका छन् ।दिपक लेख्छन – हामीसंगै हाम्रो टिममा काम गरेका साहसी भाई शालिग्राम पुडासैनीको मृत्युले स्तब्ध बनाएको छ । उनि आत्महत्या गर्ने मान्छे त होईन्न, सत्य तथ्य के हो हाम्रो टिमले पनि खोजी गर्दैछौ । तिमिलाई सधै सम्झिरहने छु भाई । हार्दिक श्रद्धान्जली ।
माैलिक हक विपरीत चितवनमा निषेधाज्ञा, निंषेधाज्ञा जारी गरेको क्षेत्रमा विहानैदेखि माइकिङ…
चितवनमा प्रहरी र लामिछाने समर्थकबीच झडप : प्रहरीद्वारा ‘डेट एक्स्पायर’ अश्रु ग्यास प्रहार
PREVIOUS Previous post: बिरामी लिएर फर्कदै गरेको एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा ७ जना घाईते !
NEXT Next post: जापानिज भाषा र सीप परीक्षाको जिम्मा जापान फाउन्डेसनलाई,अक्टोबर २७ र २८ तथा नोभेम्बर ५ र ६ मा परीक्षा
भोलि १० बजेपछि रबि लामिछाने छुट्दै ! वकिलले भने ‘गल्ति सालिकरामकै छ’ 3,686 views